Plaxo na Desktọpụ Notifier - Mmelite site na Netwọk gị Martech Zone
Plaxo na Desktọpụ Notifier - Mmelite site na netwọk gị
Plaxo abụrụla ihe enyemaka nyere aka oge ụfọdụ ọ na-akawanye mma. Izu-ụka ole-na-ole gara aga, agbaara m ekwentị m n’onu-ụzọ ụgbọala. Ọ bụ egwuregwu zuru oke, na-ekewa ekwentị na mpempe anụ ahụ 2. Enwetara m ekwentị ọhụrụ (nweta mkpuchi mgbe niile!) N'echi ya mana efunahụ m adreesị akwụkwọ m.
Emere m ngwa ngwa ngwa ngwa Verizon ma chọpụta na ha nwere Plaxo dịka otu n'ime ha. Ejiri m ya ma ugbu a enwere m ike ịmekọrịta ekwentị m na Plaxo na kọntaktị nke nhọrọ m. Ọ echekwara m ọnwa ole na ole ịza oku n’amaghị onye nọ n’akụkụ nke ọzọ.
Ugbu a, Plaxo Desktop Notifier na-abịa
Mgbe ndị mụ na ha jikọtara na twitter, biputere na blọọgụ ha, ma ọ bụ mee ọtụtụ mgbanwe ndị ọzọ, ana m enweta ọkwa desktọọpụ. Ebe m na-eso ụzọ na Twitter, Nke iri abụọ na atọ na-na-mma-arụsi ọrụ ike na m n'ezie na-atụ uche ụfọdụ tweets si folks na netwọkụ m.
Ọ bụ ezie na enwere m ọtụtụ njikọ na LinkedIn, achọpụtara m nke ahụ Plaxo bụ ọtụtụ ihe m bara uru nye m ebe ọ na-eme ka adreesị m niile (na ekwentị) mekọrịta. Achọghịkwa m ịkwụ ụgwọ maka ọrụ ahụ. Iberibe uche ịmara na kọmputa m ọ bụla ma ọ bụ ekwentị m nwere ike ịla n'iyi, m ka nwere akwụkwọ adreesị m.
Tags: kpọọ ka emekpọọ n’ọrụjikọtaramkpokọtaogwe osisi collabspotgrafffectLewis howes